Tuesday February 19, 2019 - 08:00:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maleeshiyaadka shiicada xuuthiyiinta ayaa bilaabay in ay duullaanno qorshaysan ku qaadaan gudaha dhulka xarameynka ee hadda loo yaqaan sacuudiga halkaas oo ay kajirto xukuumad madax adag oo gummaad ku heysa muslimiinta Yemen fisqi iyo fasahaadka ka w
Gaadiid gaashaaman oo ciidanka Sacuudiga laga gubay
Maleeshiyaadka shiicada xuuthiyiinta ayaa bilaabay in ay duullaanno qorshaysan ku qaadaan gudaha dhulka xarameynka ee hadda loo yaqaan sacuudiga halkaas oo ay kajirto xukuumad madax adag oo gummaad ku heysa muslimiinta Yemen fisqi iyo fasahaadka ka wada dhulalka barakeysan.
Wararka ka imaanaya Koonfurta Sacuudiga ayaa sheegaya in weeraro dhaca sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay lagu laayay askar iyo saraakiil katirsan ciidamada melleteriga Aala sacuud ee loo yaqaan xarasul wadani kuwaas oo sanadadii lasoo dhaafay lagu daad gureynayay deegaannada xuduud beenaadyada dhaca.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradaha arrimaha gudaha difaaa Aala sacuud ayaa lagu xaqiijiyay in 12 askari looga dilay dagaalka, weerar aad u qorshaysan oo maleeshiyaadka xuuthiyiintu ay maalintii sabtiga ka fuliyeen dhowr gobol oo sacuudiga katirsan ayay ugu suurtagashay in ay qabsadaan dhul baaxad leh oo tuulooyin kamid yihiin.
Arrinta cusub ayaa ah in maleeshiyaadka wakiillada ka ah iiraan ay hadda taqadum sameynayaan ayna qabsanayaan deegaanno ay leeyihiin muslimiinta xarameynka tanina waxay khilaafsantahay sheegashooyinkii aala sacuud ee ahaa in ay xarameynka difaacayaan.
dagaallo culus ayaa la sheegay in xuutihyiintu ku qabsadeen tuulooyinka kala ah rashaaxa algharbiyah iyo rashaaxa algharbiyah oo dhammaantood katirsan gobolka najraan ee dhaca koonfurta wadanka sacuudiga.
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa baraha internetka ku faafiyay muuqaal video ah oo muujinayay gaadiidka gaashaaman ee ciidamada sacuudiga oo ay dagaalka ku gubeen iyo meydadka ciidamada sacuudiga waliba waxay faafiyeen aqoonsiyadooda iyo hubkii ay wateen oo ay dagaalka uga furteen.
Dowladda sacuudiga waxay qiratay in dagaal culus ay xuuthiyiinta kula gashay saxaraha al ajaashir ee gobolka Najraan taas oo qudheedu ah guur darro marka loo eego moolka ay xuuthiyiintu dagaalka urareen iyo sheegashooyinkii hore ee aala sacuud kasoo tabin jireen dagaalka Yemen.
afhayeen u hadlay maleeshiyaadka xuutihiinta ayaa sheegay in olola dagaaleedkan cusub ee ay ku qaadeen gudaha sacuudiga uu jawaab celin u yahay daan daansi uga yimid dhanka maxamed bin salmaan, ciidamada aala sacuud ayaa la sheegay in ay barakicin ku bilaabeen dadka deggan tuulooyinka ay dagaalladu kusoo dhowaadeen.
illaa sedax gobol oo kala ah jaazaa, Najraan iyo Casiir ayaa ah meelaha ay hadda xuuthiyiintu ka dagaallamayaan waxaana aan is fidintooda hor istaagin diyaaradaha casariga dowladda aala sacuud iyo ciidamadooda ku qalabaysan hubka casriga ah ee ay sacuudigu kasoo iibsadeen dhanka mareykanka iyo reergalbeedka.